Nuxurka Warbxin Goob-joogayaashii Caalamiga Ahaa ka soo saareen Doorashadii Deegaanka Somaliland | Somaliland.Org
Nuxurka Warbxin Goob-joogayaashii Caalamiga Ahaa ka soo saareen Doorashadii Deegaanka Somaliland
December 22, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Goob-joogeyaashii Caalamiga ahaa ee ka qayb qaatay doorashooyinkii goleyaasha deegaanka Somaliland, ayaa ku hambalyeeyay dadka Somaliland iyo Komishanka Doorashooyinka (NEC) qaabkii iyo geedi-socodkii doorashooyinku u qabsoomeen 28-kii Bishii November 2012.
Warsaxaafadeed ay soo saareen xalay hay’adaha Progressio, DPU iyo Somaliland Focus (UK), waxa ay ammaaneen doorashada iyo sidii firfircoonida lahayd ee ay dadweynuhu uga qayb-qaateen.
Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in hormada qoraallkooda ee kama dambeysta ah ay soo saari doonaan badhtamaha 2013-ka, waxa kale oo ay tibaaxeen inay jiren waxyaabo ay walaac ka muujiyeen.
Doorashadii ka dib, waxa jiray culeys badan oo isa soo tarayay oo ka abuurantay habkii tirinta ee gaabinaysay. Balse markii la sii daayay natiijada, waxa soo fuulay Komishanka culays xoog leh oo ka imanayay muranadii natiijada.
Waxaanu ka xun nahay in doorashada mudahaaraadkii ka dambeeyay inuu sahayday dhawr qof oo ku dhintay.
Goob-joogayaashu waxa ay intaa raaciyeen markii Komishanka doorashooyinku ay xaqiijiyeen natiijada, waxa qalbi lulay hogaamiyeyaasha siyaasada ee kala duwanaa ee ku booriyay taageerayaashooda inay ilaaliyaan nabada iyo amniga marka ay mudaharaadayeen. Waxaanu aqoonsanay in jawigii ka dambeeyey doorashadu uu adkaa.
Iyaga oo ka hadlayay waxyaabaha walaacu ka jiray, waxa ay sheegeen in ay ka mid ahaayeen qodobo ay maalintii doorashadaba ku soo dareen warbixintoodii, sida ku noq-noqoshadii codeynta iyo caruur aan qaan-gadhinba iyo waxa ay ku sheegeen inay u muuqdeen isku dayo lagu doonayay in lagu socodsiiyo arrimahaasi.
Hase yeeshee, waxa ay warbixintooda ku xuseen inay jireen shaqaalaha doorashada oo iyagu isku dayay inay ka hortagaan falalkaasi.
Haatan oo muddo bil ahi ka soo wareegtay codeyntii, waxa muhiim ah in muranadii ka dhashay doorashada lagu dejiyay si nabadgelyo ah. Haddii aan taas lagu qaboojinna si deggan, waxa ay dhaawici lahayd caadaladii dimuqraadiyadeed ee Somaliland ku soo caano maashay.
Waxa aan ku borrinaynaa dadka reer Somaliland oo dhami inay tix-geliyaan/ixtiraamaan sharciyada doorashada.
Sidaa daraadeedna waxa ay noqon karaan doorashooyinka mustaqbalku kuwo wax ku ool ah oo lagu kalsoon yahay.
Gaar ahaan, waxa aan ku soo celinaynaa soo jeedintii aanu maalintii doorashadaba sii daynay ee ahayd in doorashooyinka soo socda aanu ugu baaqayno Somaliland inay meelmariso nidaam diiwaangalineed si ay u hagaajiso kalsoonida geedi-socodka doorashooyinka.
Gabagabadii, waxa aan iftiiminaynaa waxyaabihii badnaa ee fiicnaa ee doorashadani lahayd:
Mar labaad ayaa dadka Somaliland muujiyeen sida ay ugu heelan yihiin dhabbaha dimuqraadiyadda dhabta ah ee ay jeexdeen taariikhiyan.
Waxaanan gaar ahaan aan ku faraxsanahay in aan xusno horumarka dhabta ah ee ah inay ku jireen geedi socodkan dhalinyaro iyo haweenba, waxaanan rajaynaynaa in hore looga sii socdo. Dr. Michael Walls oo ahaa isku xidhaha hawlgallada goobjoogayaasha, ayaa sheegay Somaliland in ay samaysay horumar balaadhan oo ay ku gaadhay inay waqti adag oo kala guur ah ay ku samayso dimuqraadiyad leh wakiiladeedii.
Waxa uu ugu baaqay muwaadiniinta Somaliland oo dhan inay sii wadaan ballan-qaadkooda ah inay sameeyaan go’aamada oo laga wada qayb qaato iyo dimuqraadiyadda.
Previous PostBadhasaabka Salel Oo Daadifeeyay 10 Xildhibaan Oo Guri Saylac ku yaala isku doortayNext PostGolaha Wasiirrada Somaliland Oo Ansixiyay Miisaaniyaddii Ugu Badnayd ee qaranku yeesho	Blog